ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum အားဖြင့်စေ့ဆော် Quotes | DCC
ရှိတ်အားဖြင့်စေ့ဆော် Quotes ကျနော်တို့ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်ပါတယ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum
မြင့်ရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid Al-Maktoum တကမ္ဘာလုံးအဖြစ်ကောင်းစွာနိုင်ငံသားများနှင့်နေထိုင်သူများတိုင်းပြည်ပေမယ့်တော်တော်များများကလူကိုသာမှုတ်သွင်းတော်မူသောဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီး၏ဒုတိယသမ္မတများ၏အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်တယ်။
မိမိအအကြွေးငါးကျော်စာအုပ်များနှင့်အတူတစ်ဦးကအကြီးခေါင်းဆောင်, နှင့်တစ်တည်မြဲအမွေ ကမ္ဘာ့အတန်းအစားမြို့တော်သို့ဒူဘိုင်းပြောင်းလဲသူကသူ့ထံမှအများကြီးသင်ယူကြသူအများအပြားအားဖြင့်လေးစားသည်။
Sheik Mohammed bin ကို Rashid အယ်လ် Maktoum ကခုန်မှုနှင့်အတူဒူဘိုင်းကမ္ဘာ့ဖလား 2018 သန်း🐎ပြိုင်ပွဲအပြီးတွင်!
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအများစုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်မိမိတို့လက်၌တည်ရှိ၏။ ကျနော်တို့က၎င်း၏လူငယ်ဂုဏ်ယူလူငယ်တစ်ဦးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ။ "
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်ကိုထောကျပံ့ steadfastly အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, နယ်ပယ်များတွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုအောင်မြင်ရန်သူတို့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပါလိမ့်မယ်။ "
"အနာဂတ်ယူအေအီးလူငယ်တို့၏လက်၌တည်ရှိ၏, သူတို့တစ်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်များအတွက်နိုင်ငံ၏လောင်းကြသည်။ "
"ဒီလူငယ်ကဤမဟာဖြစ်ရပ် (Expo2020) တွင်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကစားသူတို့သည်ငါတို့ဒေသနှင့်ကမ္ဘာများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ဖန်တီးဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်အောင်ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးစိတ်သန်း, စောငျ့ရှောကျလေ့လာသင်ယူနှင့်အထောက်အကူပြုရန်အခွင့်အလမ်းများရသင့်တယ်။ "
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငယ်ရွယ်တိုင်းပြည်ကိုလက်နှင့်လူငယ်များ၏အောင်မြင်မှုများကတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ လူငယ်ငါတို့အစွမ်းသတ္တိနှင့်မြန်နှုန်းအနာဂတျအတှကျကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းစိမ်ရှိ၏ဖြစ်၏။ "
"တိုင်းအကြီးအအသိုင်းအဝိုင်းနောက်ကွယ်မှာတစ်ဦးချင်းစီမျိုးဆက်ဦးဆောင်နှင့်အဆင့်မြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုများနှင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပြုစုပျိုးထောင်, ကြီးသောအမျိုးသမီးတွေရပ်တယ်။ "
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အမြိုးသမီးမြားရဲ့အလားအလာသော့ဖွင့်ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် - သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဣတ္ကာကွယ်ပေးသည်တစ်ခု, သူတို့ကိုသူတို့ဘဝအတွက်လိုအပ်သောချိန်ခွင်လျှာဖန်တီးကူညီပေးသည်, မိမိတို့အခွက်နှင့်အလားအလာတန်ဖိုးထားသည်။ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ပေးထား, ငါသည်အမြိုးသမီးမြားနိမိတျလက်ခဏာ၏တိုတောင်းသောဘာမျှမလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုဖြစ်၏။ "
"ငါသည်ကျယ်သောအသံနှင့်ရှင်းလင်းသောကြောင့်ပြောဆိုကြပြီ: အမျိုးသမီးများသည်နိုင်ငံအတွင်းရှိရှိသမျှသောခေါင်းဆောင်မှုရာထူးသင်ဆုံးရှုံးမည်ကို စိုးရိမ်. , ယောက်ျားသတိပြုပါ။ "
"ငါ့အလုပ်ကိုအဖွဲ့ရာခိုင်နှုန်း 70 အမျိုးသမီးများဖွဲ့စည်း၏။ "
"ငါသည်ငါ၏သားသမီးအပေါ်မှာငါ့ထင်မြင်ချက်များစည်းကြပ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုရွေးချယ်မှုလွတ်လပ်ခွင့်မပေးပါဘူး, ဒီအကြှနျုပျအဘ, ငါ့ကိုထမြောက်တော်မူပုံကိုပါပဲ။ "
"ကျနော့်အမေ, ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သူမ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေရသော may, ငါ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး shaped; သူမ၏မှကျေးဇူးတင်စကား, ငါသည်များစွာသောတန်ဖိုးများ, ကောင်းသောစရိုက်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဝယ်ယူပြီ။ "
"ဒါကမိခင်ဖြစ်ပါသည်, သူမသည်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုမြင်ဘူးသည်အထိစားခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ငါတို့အိပ်ပျော်သည်အထိငြိမ်ဝပ်စွာနေနှင့်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းခဲ့ကြမဟုတ်လျှင်ပျော်ရွှင်ဘယ်တော့မှခဲ့တာပါ။ "
"ဒီအကြီးမြတ်ဆုံးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြှနျုပျအဘထံတော်က ... ခဲ့တာ, ငါစိတ်ရှည်ရန်နှင့်တရားစီရင်ခြင်းကိုဖြတ်သန်းမတိုင်မီ deliberate ဖို့သင်ယူ"
"တစ်ခုကလွယ်ကူသောဘဝယောက်ျားလုပ်မထားဘူး, မကလူအမျိုးမျိုးတည်ဆောက်ထားဘူး။ စိန်ခေါ်မှုများယောက်ျားဖြစ်စေလျက်, ကြောင့်လူအမျိုးမျိုးတည်ဆောက်သောဤသူယောက်ျားဖြစ်၏။ "
"လူအများစုဟာစကားပြော; ကျနော်တို့အမှုအရာလုပ်ပါ။ သူတို့ကစီစဉ်; ကျနော်တို့အောင်မြင်ရန်။ သူတို့ကချီတုံချတုံ; ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်။ ကျနော်တို့လူသားတွေအဖြစ်မှန်သို့အိပ်မက်အသွင်ပြောင်းဖို့သတ္တိနှင့်ကတိကဝတ်များရသောအခါ, သူတို့ကိုရပ်တန့်နိုင်မဘာမှမရှိဘူးကြောင်းသက်သေနေထိုင်နေကြရသည်။ "
"အနာဂတျအတှကျစိတ်ပိုင်းဖြတ်, နည်းဗျူဟာများနှင့်ရူပါရုံကိုထူးချွန်နှင့်အောင်မြင်မှုများအတွက်ရှာပုံတော်၌အကြှနျုပျတို့၏စစ်မှန်သောအရင်းအမြစ်များကိုပါ။ "
"ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ပျော်ရွှင်မှုကိုကိုထက်ပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းဘာမျှအကြောင်းပါ။ ဒါဟာတကယ်က "ရိုးရှင်း
"ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောလှပသောဘဝဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လူအတော်များများကစိုးရိမ်ပူပန်ဝန်ကိုထမ်းများနှင့်မှုန်ကုပ်ကုပ်ဖြုန်းနေကြတယ်။ သင်အလွယ်တကူ, ကလေးတစ်ဦး၏ရယ်မောခြင်းအတွက်မိခင်တစ်ဦး, မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အပြုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်သနားကြင်နာတတ်တဲ့မယား၏မတ်ေတာ၏နူးညံ့ကြင်နာမှုအသက်တာ၏ဂုဏ်အသရေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ "
"အကြင်သူသည်သူပထမဦးဆုံးအနေအထားမခံထိုက်ကြောင်းကိုမိမိကိုမိမိယုံကြည်စိတ်ချအလွန်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ပျက်ကွက်မိမိကိုယ်ကိုပျက်စီးကိန်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရလျက်ရှိသည်။ "
"ထူးချွန်များအတွက်ပြိုင်ပွဲအဘယ်သူမျှမ finish ကိုလိုင်းရှိပါတယ်။ "
"ဘဝကတချို့လူတွေတန်ဖိုးထားဖို့မပေါ်လာကာထူးခြားသောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းအသက်ရှုခြင်းနှင့်ရနံ့ခုနှစ်တွင်တိုင်း touch နှင့်မျက်မှောက်ကျနော်တို့အသစ်သောအတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အကြုံများပေါများကြွယ်ဝခံစားရဖို့အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်လက်ဆောင်အဖြစ်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးငှက်၏သီချင်းတစ်ဦးထံမှအမျက်ထွက်သောအသံသည်၏ကွမျးတမျးမှနားကြားတိုင်းအသံတစ်အံ့ဖွယ်ပါပဲ။ "
"လူတိုင်းဟာသေးငယ်တဲ့စတင်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ခုတည်းဆဲလ်အဖြစ်ဘဝကိုစတင်ဖို့။ တိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစိတ်ကူးနှင့်အတူလူတစ်ဦးအဖြစ်စတင်သည်။ ဘယ်လောက်မြန်သငျသညျ, သငျသညျအရဘယ်လောက်ဝေးသွားသင့်လက်၌တည်ရှိ၏။ သင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုအဆိုပါပိုကြီး, အပိုကြီးသင့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်လမ်းပေါ်ထိ မိ. လဲကြလိမ့်မည်နည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုကွောကျရှံ့သေးငယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါစေလို့မရပါဘူး။ ကျနော်တို့ကြီးတွေဖြစ်သတ္တိဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ "
"ပျက်ကွက်မြေပေါ်မှာကျသွားမမူ သငျသညျလဲသေကြပြီနှင့်သင်နောက်တစ်ကြိမ်ထရပ်ဖို့မဆုံးဖြတ်ရသောအခါအကြီးမြတ်ဆုံးပျက်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ကအဲဒီမှာကျန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ "
"စွန့်စားမှု ယူ. ကျရှုံးစေရန်တစ်ဦးပျက်ကွက်မဟုတ်ပါဘူး။ အစစ်အမှန်ပျက်ကွက် "ဆိုစွန့်စားမှုယူကိုကွောကျရှံ့ခွငျးဖွစျသညျ
"ပြိုင်ပွဲကိုအမြဲသငျသညျအားကောင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ပြိုင်ပွဲကိုသာအားနည်းနေသဖြင့်ကြောက်ရွံ့ရိုသေ၏။ "
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ဘာလုပ်တဲ့အခါအလုပ်လုပ်နေတာနဲ့တူ ", သင်ခံစားရပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
"ကိုပြောင်းသို့မဟုတ်သင်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်: မိမိတို့၏လူမျိုး၏ကောင်းသောလစျြလြူရှုသောသူသည်ခေါင်းဆောင်များစွန့်ပစ်လိမ့်မည်။ ခေါင်းဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘဲအခွင့်ထူးတစ်ခုတံခါးပေါက်ဖြစ်၏။ "
"ကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်မှုဆိုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အုပ်စုသူတို့ရှေ့မှာတစ်ဖွဲ့လုံးကအသိုင်းအဝိုင်းများ၏အကျိုးစီးပွားတတ်၏။ ခေါင်းဆောင်မှု၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုသာအရေးယူလျက်နှင့်မစကားလုံးများကိုမှတဆင့်ထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ "
"တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်သူ့အဖွဲ့၏စွမ်းအင်နှင့်စွမ်းရည်ကိုထုတ်ဆောင်ကြဉ်းရန်အဆင်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးသောသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကအကြီးခေါင်းဆောင်ထက်ပိုကြီးမြတ်ခေါင်းဆောင်များဖန်တီးနှင့်တစ်ခုတည်းလူတစ်ဖို့အဖွဲ့အစည်းကိုလျှော့ချမထားဘူး။ "
"မဖြစ်နိုင်ဟူသောစကားလုံးခေါင်းဆောင်ရဲ့အဘိဓါနျအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးစိန်ခေါ်မှုများအားယုံကြည်ခြင်း, ပြဌာန်းခွင့်နှင့်သန်နိဋ်ဌာနျသူတို့ကိုကျော်လွှားပါလိမ့်မယ်။ "
"တစ်ဦးကစစ်မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်သည်သူ၏အနေအထားကနေကား, မိမိကျင့်ဝတ်ကနေသူ့အဘို့လူရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှ၎င်း, အလုပ်၏မိမိလယ်၌သူ၏အသိပညာ, ပညာရေးနှင့်ထူးချွန်ထံမှအာဏာကိုရယူထားခြင်းမထားဘူး။ "
"ယူအေအီး၏နှလုံးသည်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်များ, အစိုးရနှင့်လူမျိုး၏ရစ်သမ်မှ beats; အားလုံးတမျိုးတည်းဖြစ်သကဲ့သို့, စည်းလုံးခြင်းနှင့်ဘယျသူမှမအောငျ။ "
"ယူအေအီးကမ္ဘာ့တောက်ပခွက်တဆယ်အချို့ကိုဆွဲဆောင်, အသိပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအချက်အချာအဖြစ်က၎င်း၏အနေအထားကိုခိုင်မြဲခဲ့သည်။ "
"ငါသည်ဒူဘိုင်းနံပါတ်တစ်ဖြစ်ချင်တယ်။ မဒေသတွင်း၌, ဒါပေမယ့်ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ အရာအားလုံးထဲမှာနံပါတ်တစ်: မြင့်မားတဲ့ပညာရေး, ကျန်းမာရေး, နှင့်အိုးအိမ်။ ငါသည်ငါ၏လူလူနေမှုအမြင့်ဆုံးလမ်းပေးချင်တယ်။ "
"ကျနော်တဦးတည်းအခွင့်အလမ်းစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အခြားအဘို့စောင့်ဆိုင်းဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အဘို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏နေသောရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိကြပြီမဟုတ်။ သင်သည်အဘယ်သို့ယခုတွေ့မြင်ရှေ့ဆက်တည်ရှိသည်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံကို ... ဖွင့်သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချည်းနှီးဖြစ်၏။ "
"အာဖရိကမှာတစ်ခုချင်းစီကိုသစ်ကိုတစ်ရက်နှင့်အတူသမင်ဒရယ်ကိုသူအမြန်ဆုံးခြင်္သေ့သည် outrun သို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ကို သိ. နှိုး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ခြင်္သေ့နှိုးဆော်နှင့်ဆန့်သူကအလျင်မြန်ဆုံးသမင်ဒရယ် outrun သို့မဟုတ်အငတ်ထားရမယ်သိမှတ်ကြလော့။ ဒါဟာလူသားမျိုးနွယ်အဘို့အဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ဒရယ်သို့မဟုတ်ခြင်္သေ့သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းရှိမရှိ, သင်ရိုးရှင်းစွာအခြားသူများကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ထက်ပိုမြန် run ဖို့ရှိသည်။ "
"လူရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးသည်သူ၏အတွေးအခေါ်များနှင့်သဲကန္တာရ, တိုက်ကြီးနဲ့သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးတယောက်ကိုတယောက်လူတစ်ဦးကနေသူတို့ကိုပြန့်နှံ့ရန်သူ၏စွမ်းရည်၏တနျခိုးပေါ်တွင်မူတည်သည်။ "
"ကမ္ဘာ့အဘယ်သူမျှမစောင့် - သင်ယူနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲကြဘူးတဲ့သူတွေကိုထိ မိ. လဲခြင်းနှင့်မကြာခဏလဲကျနိုင်ပါတယ်"
သင်အကြိုက်ဆုံးရှိတ်မိုဟာမက်ကိုးကားကဘာလဲ? ဥစ္စာ add ဖို့အခမဲ့ခံစားရ! office@dubaicitycompany.com ဖို့တောငျးဆိုခကျြကိုပို့ပါ